Chinhu Chitsva Pamusangano Wepakati Pevhiki
SARUDZA MUTAURO Abua Abui Acholi Afrikaans Aja Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Assamese Ateso Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Mozambique) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuabo Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Douala Drehu Dutch Edo Efik Esan Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Gokana Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kannada Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mende Mingrelian Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Kutanga muna January 2018, musangano wepakati pevhiki uchange wava nezvinhu zvichatorwa muBhaibheri rekudzidza reShanduro yeNyika Itsva yeMagwaro Matsvene reChirungu riri paindaneti, kunyange risati rava kuwanika mumutauro wenyu. Bhaibheri iri rine tsanangudzo dzemamwe mashoko, uye mapikicha nemavhidhiyo. Izvi zvichakubatsira pakugadzirira musangano uye zvichaita kuti uwedzere kuswedera pedyo naBaba vedu vane rudo, Jehovha!
TSANANGUDZO DZEMAMWE MASHOKO
Dzinokubatsira kunzwisisa tsika, nzvimbo uye mashandisirwo emamwe mashoko ari muBhaibheri.
Tambo inopfungaira: Rambi raishandiswa nevakawanda raiva kamudziyo keivhu kadiki kaiiswa mafuta emuorivhi. Rambi racho raiiswa tambo yemufurakisi. Mashoko echiGiriki ekuti “tambo inopfungaira” anogona kureva tambo yava kuda kudzima. Uprofita huri pana Isaya 42:3 hwakataura kuti Jesu aizonzwira tsitsi vanhu vaizvininipisa uye vaidzvinyirirwa. Aizopfutidza tariro yavo yainge yava kudzima.
Chokwadi: Shoko rechiGiriki rekuti a·menʹ rakatorwa sezvariri kubva pane rechiHebheru rekuti ʼa·menʹ, iro rinoreva kuti “ngazvive zvakadaro,” kana kuti “chokwadi.” Kakawanda, Jesu aitanga nekutaura shoko iri, pamwe pacho achitaura vimbiso kana kuti uprofita. Izvi aizviitira kuti aratidze kuti airevesa. Ndiye chete aishandisa seizvi shoko rekuti “chokwadi,” kana kuti ameni. Dzimwe nguva aidzokorora shoko racho kaviri (a·menʹ a·menʹ), sezviri muEvhangeri yaJohani.—Joh 1:51.
Mapikicha nemavhidhiyo anobatsira kunzwisisa zvinhu zvakasiyana-siyana zviri muBhaibheri.
Bhetifage, Gomo reMiorivhi Uye Jerusarema
Vhidhiyo iyi inoratidza mugwagwa unoenda kuJerusarema uchibva nechekumabvazuva, uko kune nzvimbo inonzi et-Tur inofungidzirwa kuti ndiyo yainzi Bhetifage. Mugwagwa wacho unopfuura nechepamusoro peGomo reMiorivhi. Bhetani iri kumabvazuva kweBhetifage uye kweGomo reMiorivhi. Jesu nevadzidzi vake pavaiva muJerusarema, vaiwanzorara kuBhetani, iyo yava kunzi el-ʽAzariyeh (El ʽEizariya) muchiArabic, zvichireva kuti “Nzvimbo yaRazaro.” Jesu anofanira kunge ainorara kumba kwanaMarita, Mariya naRazaro. (Mt 21:17; Mk 11:11; Ru 21:37; Joh 11:1) Paainge ava kuenda kuJerusarema, Jesu anogona kunge aifamba nemugwagwa uri kuratidzwa muvhidhiyo. Paakatasva mwana wembongoro achipfuura nepaGomo reMiorivhi musi waNisani 9, 33 C.E., anogona kunge akashandisa mugwagwa uyu achibva kuBhetifage.
Mugwagwa unobva kuBhetani uchienda kuBhetifage
Chipikiri Pabhonzo Repachitsitsinho
Pikicha iyi ndeyechitsitsinho chekugadzira chakarovererwa chipikiri chakareba 11,5 cm. Chitsitsinho chacho chaicho chakawanikwa muna 1968, paicherwa matongo nechekuchamhembe kweJerusarema, uye ndechemunguva yaitonga vaRoma. Chitsitsinho ichi chinoratidza kuti vanhu vanogona kunge vaiurayiwa vachirovererwa nezvipikiri padanda. Chipikiri chacho chinogona kunge chakafanana nezvipikiri zvakashandiswa nevaRoma pakuroverera Jesu Kristu padanda. Chitsitsinho chakawanikwa muna 1968 chaiva mubhokisi redombo, iro raiiswa mabhonzo echitunha anenge aoma. Izvi zvinoratidza kuti munhu airovererwa padanda aigona kuzovigwa.—Mt 27:35.